Mmetụta ndị ọbịa na Web gị na ezigbo oge Formdị nkwado | Martech Zone
Mmetụta izizi ị na-enwekarị dịka onye na-eji Web Application bụ mgbe ị mejupụtara ụdị weebụ. Ọ na-eju m anya na ọnụ ọgụgụ ụdị weebụ dị na ebe ahụ nwere enweghị ikikere ma ọ bụ na-eche ka ị nyefee ụdị mpempe akwụkwọ gị tupu ị gwa gị nsogbu ị nwere.
Ọchịchị m bụ na a na-akwado ihe ọ bụla na-akwadoghị ya. Ihe ọ bụla enwere ike ịkwado tupu ịnye ụdị ahụ ga-abụrịrị. Na ọbịbịa nke Ajax, ị nwere ike ịkwado data megide nchekwa data gị tupu ntinye. Ejila ụzọ dị umengwụ - ndị ọrụ nwere ekele maka enyemaka ahụ!
Lee ihe atụ ụfọdụ:
Adreesị ozi-e - Achọghị m ịma ụdị nke ga - eme ka ị dejupụta adreesị email gị ugboro abụọ iji kwado ha, mana eziokwu ahụ na ha anaghị agwa gị ma ha dakọtara ma ọ bụ na ha wuru n'ụzọ kwesịrị ekwesị enweghị mgbaghara.
Okwuntughe - Ọ bụrụ na ị ga - eme ka m pịnye paswọọdụ ugboro abụọ, biko biko gosipụta na ụkpụrụ ndị ahụ bụ otu tupu ịdee ụdị ahụ.
Ike okwuntughe - Ọ bụrụ n ’ịchọrọ otu okwuntughe ike (nchikota mkpụrụedemede mkpụrụedemede ma ọ bụ okwu ikpe), nye m nzaghachi maka m mgbe m na-edebanye okwuntughe m. Echerela ka m nyefee ya tupu ị gwa m ọ dara.
AFỌ - Ọ bụrụ na ị ga-achọ ụbọchị dị n’ụdị am / d / yyyy, hapụ m ka m tinye ozi n’otu ubi site na ịpị ụkpụrụ ndị ahụ na ịhazi ya nke ọma. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iduga efu, tinye ha mgbe emechara. Ọ dị mma igosipụta otu usoro ma chekwaa ọzọ na nchekwa data gị.
Datebọchị Taa - Mejupụta m! Gịnị mere i ji na-arịọ m ka m mejupụta ụbọchị mgbe ị maraworị ya?!
Bọchị - Ọ bụrụ n’inwe ngwa mba ofesi, ịnwere ike ịtọ ụdị usoro ụbọchị dabere na Internationalization nke ngwa gị. N'ezie, ọ dị mma ịnwe nhọrọ maka ndị ọrụ iji kpochapụ nhọrọ ahụ ma họrọ nke ha.
Nọmba Ekwenti - na-eburu n'uche mba ụwa, ụdị ubi ndị a nwekwara ike ịme ka ọ dị mfe site na ịhazi nọmba ekwentị na interface, mana ịchekwa ya na usoro ọzọ nke ahụ dị mma maka njedebe gị. Emela ka ndị ọrụ gị pịnye ihe mgbochi, oghere, na ntụpọ.
Oke Ogologo Ederede - ọ bụrụ n’itinye ọnụ ọgụgụ ederede ndị echekwara na ọdụ data gị, ekwela ka m pịnye ọtụtụ mkpụrụedemede ahụ! Ọ chọghị nkwado siri ike… ọ bụ naanị ntọala na igbe ederede.
Ogologo ederede kacha nta - Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ogologo ederede pere mpe, pịazie mkpu ruo mgbe m nwere mkpụrụedemede zuru ezu.
A bụ ihe atụ nke a Paswọdu Ike ọrụ si Geek Amamihe:
Tags: ụdịnkwado ntanetị ụdị ntanetịike paswọọdụ
Ezigbo ihe, ma ọ bụghị ihe ọ bụla ụdị ntanetị "chọrọ" n'echiche m.
Okwuntughe checker na-relativly agbajikwa. Paswọdu ọ bụla dị mma ma ọ bụrụ na ọ dị ogologo.
Nke a ọ bụ mediocre okwuntughe?
Ọ bụ naanị ihe atụ nke isi nke post. Echere m na nke ahụ bụ ezigbo okwuntughe! Jisie ya. 😉
Maka m ụdị nkwado kachasị mma bụ mgbe ị nyere onye ọrụ ahụ mmetụta nke nkwado ndị ahịa ebe ọ bụ nkwado AJAX / Server.
Naanị ị ga-etinye na ụdị ụdị gị ụfọdụ njikwa ihe omume (igodo, blur, pịa, wdg. mfe, na ụbọchị bụ na-ezighị ezi usoro, wdg…)
Mgbe onye ọrụ mechara bipụta ụdị ahụ site na ịpị bọtịnụ ntinye, ị ka nwere ike iji ọrụ nkesa ihe “elele” iji kwado oge ikpeazụ ụdị ahụ tupu ịtinye data na nchekwa data ma ọ bụ usoro ọzọ.
Zọ a, ndị ọrụ na-enwe obi ụtọ na onthego nkwado NA ndị mmepe na-enwe obi ụtọ na akụkụ nkesa naanị nkwado mmepe.
Nke ahụ dị ka ndụmọdụ siri ike. Adịghị m onye mmemme (ọ bụ ezie na agbachi m ngwa ole na ole).
Ọkt 18, 2007 na 2:19 PM
Ọ bụghị ngwa ngwa Doug - ekwenyere m na atụmatụ izizi gị na atụmatụ ndị a na-enye aka, dịka ịhazi SSN n'ụsọ dị obere. Na umengwụ ya naanị biputere ozi na ezighi ezi ya, mgbe ị nwere ike idozi ya na-enweghị ịkọ nkọ na usoro ahụ.
Agbanyeghị, ekwenyere m na Nicolas maka iji arụ ọrụ Server n'akụkụ na AJAX.
Aha gị kwuru "Mmetụta Ndị Enyi Gị…" mana ị gaghị enwe mmasị na minit 2 a, akpọtụrụ na post.
Degharịa aha gị (na-eduhie eduhie, na-eme ka mmadụ chee na e nwere ihe atụ na omume ndị a na-atụle).
Ọ bụrụ na ndị mmadụ anaghị eme nke a n'ụdị ha, mgbe ahụ ha na-amụ naanị ma ọ bụ ụdị adịghị mkpa iji nkwado.
Ezigbo web programmers mara nke a ugbua ma mee ya.
Ndo maka nke ahụ! Isi okwu m abụghị inye ndị nzaghachi nzaghachi - m na-esite n'echiche nke Onye njikwa Ahịa. Ekwenyere m na gị - mana ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ụfọdụ ndị mmepe ndị ọzọ anaghị eme ya! Echere m na nke ahụ bụ ihe nwute.
Daalụ maka iwe oge!
Ekwenyesiri m ike na nkwado ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke ngwa ọ bụla. Dị ka otu ndị otu, m na-achọpụtakarị onwe m iziga koodu ka m wee “mechaa” maka ebumnuche dịka enweghị nkwado ma ọ bụ igbochi ogologo ntinye ederede.
Maka ọtụtụ ihe m na-arụ ọrụ na achọtara m na ọ na-ewe ihe dịka 50% nke oge iji nweta ihe na-arụ ọrụ, n'okpuru ọnọdụ nkịtị yana ọ bụrụ na ndị ọrụ jiri sistemụ ahụ otu m bu n'uche. Nke ọzọ 50% nke oge mmepe na-abịa site na ịlele ntinye ha, na-eme ka a na-echekwa data izu ike, ma na-eme ka mpempe akwụkwọ anaghị ekwe ka data ọjọọ abanye.
Edere m akwụkwọ banyere etu m si eji InputVerifiers na ngwa ngwa ngwa ngwa m, ma gosi etu m ga esi enyocha mpaghara ederede email. Okwu m na-eji eme ihe na-adị mfe ịgbanwe iji gosipụta nọmba ekwentị, zipcodes, SSN, wdg.
My blog post bụ na http://timarcher.com/?q=node/36
Ezi edemede Doug!
Ekwenyere m. Okwuntughe dị ezigbo mkpa ma gha ewere ya nke ọma. Echere m na ọ bụ naanị ihe dịkarịsịrị ka ụdị ụdị pịnye paswọọdụ ugboro abụọ, mana ịgaghị egosi ịdị mma nke okwuntughe abụọ ahụ na-egosi na anaghị ele ya anya dị ka ihe dị mkpa.
Ekwenyere m na nkwado ndị ahịa nwere ike ịbụ ezigbo njirimara ọrụ enyi. Agbanyeghị, ọ dịkarịrị mkpa ijide n'aka na nkwado ahụ n'onwe ha nwere ezi uche.
I nyere ezigbo ihe atụ nke otu nkwado nwere ike iduhie ndị ọrụ yana, ka njọ, chụpụ ha na saịtị anyị:
Geek Wisdom paswọọdụ ike nkwado si na-eche UZUAKUIMIss na-adịghị ike paswọọdụ. Ọ bụghị naanị na nke a bụ paswọọdụ siri ike zuru oke mana ọ ga-ekewapụkwa ndị ọrụ n'ihi na ọ na-enye ha echiche ụgha na ịbanye n'ime saịtị gị site na iji paswọọdụ a ga-enwe ntụkwasị obi n'ụzọ ụfọdụ.
Ọ ga-aka mma (ma dị mfe) igosi ndị ọrụ na ezi paswọọdụ dịkarịa ala mkpụrụ edemede isii ma kwesịrị ịnwe ma nọmba na mkpụrụedemede.
Mgbakwunye ndị ọzọ na-enyo enyo gụnyere aha njirimara ndị chọrọ obere opekempe ma ọ bụ enweghị ike ịnwe oghere. Kedu ihe adịghị mma na aha njirimara X, john doe, ma ọ bụ ọbụna # *! §? Enwere m ike ijikwa nke ahụ.
Ekwenyere m na gị. Fọdụ ụfọdụ dị mma, mana ọ naghị enye ezigbo nkwado. Enyere ozi nkeonwe ma ọ bụ naanị ihe kwesịrị ekwesị iji ya kpọrọ ihe dịka ụdị azụmaahịa ọ bụla na akwụkwọ siri ike.
Ee, abịara m ebe a na-enwe olileanya maka koodu ịmaatụ. Biko nyegharịa isiokwu nke ọkwa a.
Ọkt 26, 2007 na 7:20 PM
Maka ndị nke ị debanyere na post a, achọtara m nke ọma n'ọbá akwụkwọ online maka ụdị nkwado akpọ LiveValidation.
Achọpụtara m na ọ bụ ntakịrị ihe ọchị na ị biputere banyere ịdị mma maka inyeaka ụdị nkwado oge, mana, ụdị nkọwa gị na ala nke post anaghị enye nke ọ bụla n'ime ndị a
Aghọtara m na ị na-eji WordPress iji blọgụ echiche gị na ịntanetị, mana ikekwe ị ga-ahụ na ị na-eme ihe ị na-ekwusa abụghị ụdị echiche ọjọọ a. 🙂
Ezi post, n'agbanyeghị, ọbụlagodi na anaghị m ekwenye na ihe niile ị dere.
Doh! B gbara m, Amanda! Achọrọ m ka m nwee oge iji mee ka nkwado dị mma na itinye ya na WordPress. Ihe kachasị m mma Adobe Spry nkwado nkwado ma nwee obi ụtọ ịhụ mmadụ itinye ihe abụọ ahụ!
Daalụ! (Ana m ekele mgbe niile na enwere ọtụtụ echiche na isiokwu ọ bụla).